မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်နိုင်တဲ့သတင်း မှားတွေရေး သားနေသူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ မေချစ်သွေး – Shwe Likes
ပြည်သူ့မင်းသားချော သရုပ်ေ ဆာင် ပိုင်တံခွ န်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လကပဲ နိုင်ငံေ ရးလှုပ် ရှားမှုကြောင့် အလုပ်ကြ မ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်ချမှ တ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ် ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရပြီး နောက် တစ်နေ့မှာပဲ ကမ္ဘာ့အချော ဆုံးအမျိုးသား အဖြစ် ရွေး ချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ဟာ ပရိသတ်ေ တွနဲ့အတူ မီဒီယာတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ြ ခင်းခံနေရတာပြဲ ဖစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ မေချစ်သွေးက ပိုင်တံခွန်ရဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်မမှန်ရေး သားနေကြတဲ့ မီဒီယာေ တွကို အခုလိုပဲပြောလာ တာကို တွေ့ရပါ တယ်။
ပေ့ချ်တ စ်ခုကနေပြီး ပိုင်တံခွန် ရဲ့အစ်မ မေချစ်ေ သွးဟာ စင်္ကာပူ မှာကျင်းပပြု လုပ်မယ့် TC Candler ရဲ့ ဆုပေးပွဲကို ပိုင်တံခွန်နဲ ့ရုပ်ချင်းတူတယ် လို့ နာမည်ြ ကီးနေတဲ့ ကောင်လေးကို အစားထိုး တက်ခိုင်းဖို့ စီစဉ်ေ နတယ်ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထိုကောလ ဟာလနဲ့ပတ် သက်ပြီး ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ် မ မေချစ်သွေးက “ဘယ်က အစ်မက စီစဉ်တာလဲ? သတင်းကို သေချာမစုံစ မ်းမစစ်ဆေးပဲ နာမည်လေ ျှာက်တပ်တဲ့ page ရေ -ီး ပဲ..Attention လိုချင်ရင် တခြားန ည်းနဲ့ရှာဟ🖕🏻 Edit.. အဲ့ကောင်ေ လးကိုတော့ အားနာပါတယ် သူလဲ မဆီမဆိုင်အေြ ပာခံနေရရှာတာ ပြောချ င်တာက ခေါင်းစဉ်လေ ျှာက်တပ်ရေးတဲ့ page တွေကိုပဲ😤”ဆိုပြီး ပြော လာပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ မေချစ်သွေး ကတော့ ထောင် ထဲရောက်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတောင် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့သ တင်းတွေေ ရးသားနေတဲ့ ပေ့ချ်အတုေ တွကို စိတ်တိုစွာနဲ့ေြ ပာလာခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: May Chit Thway’s fb
ျပည္သူ႔မင္းသားေခ်ာ သ႐ုပ္ေ ဆာင္ ပိုင္တံခြ န္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ လကပဲ နိုင္ငံေ ရးလႈပ္ ရွားမႈေၾကာင့္ အလုပ္ၾက မ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ခ်မွ တ္ခံခဲ့ရတာပဲျဖစ္ ပါတယ္။
ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ေနာက္ တစ္ေန႔မွာပဲ ကမၻာ့အေခ်ာ ဆုံးအမ်ိဳးသား အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင္တံခြန္ဟာ ပရိသတ္ေ တြနဲ႔အတူ မီဒီယာေတြရဲ့ အာ႐ုံစိုက္ျ ခင္းခံေနရတာျပဲ ဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာလည္း ပိုင္တံခြန္ရဲ့ အစ္မ ေမခ်စ္ေသြးက ပိုင္တံခြန္ရဲ့သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ေရး သားေနၾကတဲ့ မီဒီယာေ တြကို အခုလိုပဲေျပာလာ တာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။
ေပ့ခ်္တ စ္ခုကေနၿပီး ပိုင္တံခြန္ ရဲ့အစ္မ ေမခ်စ္ေ သြးဟာ စကၤာပူ မွာက်င္းပျပဳ လုပ္မယ့္ TC Candler ရဲ့ ဆုေပးပြဲကို ပိုင္တံခြန္နဲ ့႐ုပ္ခ်င္းတူတယ္ လို႔ နာမည္ျ ကီးေနတဲ့ ေကာင္ေလးကို အစားထိုး တက္ခိုင္းဖို႔ စီစဥ္ေ နတယ္ဆိုၿပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
ထိုေကာလ ဟာလနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ပိုင္တံခြန္ရဲ့အစ္ မ ေမခ်စ္ေသြးက “ဘယ္က အစ္မက စီစဥ္တာလဲ? သတင္းကို ေသခ်ာမစုံစ မ္းမစစ္ေဆးပဲ နာမည္ေလ ၽွာက္တပ္တဲ့ page ေရ -ီး ပဲ..Attention လိုခ်င္ရင္ တျခားန ည္းနဲ႔ရွာဟ🖕🏻 Edit.. အဲ့ေကာင္ေ လးကိုေတာ့ အားနာပါတယ္ သူလဲ မဆီမဆိုင္ေၾအ ပာခံေနရရွာတာ ေျပာခ် င္တာက ေခါင္းစဥ္ေလ ၽွာက္တပ္ေရးတဲ့ page ေတြကိုပဲ😤”ဆိုၿပီး ေျပာ လာပါတယ္။
ပိုင္တံခြန္ရဲ့ အစ္မ ေမခ်စ္ေသြး ကေတာ့ ေထာင္ ထဲေရာက္ေနတဲ့ ပိုင္တံခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာင္ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့သ တင္းေတြေ ရးသားေနတဲ့ ေပ့ခ်္အတုေ တြကို စိတ္တိုစြာနဲ႔ေျ ပာလာခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: May Chit Thway’s fb
အပို အလိုမရှိတဲ့ကောက်ကြောင်းလှလှလေးတွေနဲ့ မြင်ရသူတိုင်းက အချစ်ပိုစေေအာင် နေတတ်လွန်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပို
ဒီကနေ့ မနက်ခင်းပိုင်းမှာ ကွယ်လွန်သွားပီဖြစ်တဲ့ “ဟောင်းပြီ” သီချင်းမူပိုင်ရှင် တေးသံရှင် စောဝင်းလွင်
တော်ရုံသတ္တိရှိတဲ့ သူတွေတောင်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့ အရာတစ်ခုကို အပြုံးမပျက်ပဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် တက်တူးဆရာမ ရဲ့ချီးကျူးခြင်း ကိုခံခဲ့ရတဲ့ ပိ်ုင်တံခွန်